Ceelkii Biyaha ee Degamada Xingalool ayaa maanta Dibu habayn lagu wadaa | maakhir.com
Ceelkii Biyaha ee Degamada Xingalool ayaa maanta Dibu habayn lagu wadaa
Xingalool:- Sida ay noo sheegeen dadka Deegaanka Xingalool waxa maanta si toosa magaaladaasi uga bilawday hagaajinta Ceelka Biyiha ee Degamada Xingalool kaasi oo mudooyinkan Fadhiyay ka dib cilad soo food saartay, dibu habayntan ayaa waxa wada Shirkada ceelasha hagaajisay, oo Gacan ka helaysa Dada Deegaanka Xingalool.
Degamada Xingalool ee Gobolka Sanaag ayaa waxa saaka halkaasi looga tafa xaytay hagaajinta Ceelkaasi Biyaha kaasi oo ahaa mid mudo bil ah Fadhiyay, dad badan oo Deegaanka Xingalool jooga ayaa noo xaqiijiyay habaynta Ceelkaasi inay si toosa maanta halkaasi uga bilaabatay iyada oo la filayo in dhawaan la soo Afmeero.
Dadku waxay kaloo sheegeen inay Qalabka ceelkaasi lagu hagaajinayo ay bixisay Maamulka Goboleedka Puntland kuwaasi oo dhawaan Deeqdaasi Qalabka Ceelka ah gudoonsiiyay Maamulka Degmada.
Ceelkaasi ayaa waxa ka xumaa sida naloo sheegay qalab muhiim ah kaasi oo joojiyay habsami usocodkii Ceelkaasi, qaylan dhaan Badan oo ay direen dadka Deegaanku ayaa waxay suura galisay inay Ceelkaasi Boodhka laga jafo isaga oo ahaa mid Deegaanka oo dhan aad loogaga soo hayaamo oo dhulbadan Biyihiisa laga soo doonto.
Degamada Xingalool ayaa waxa ku yaala ilaa Laba Ceel kuwaasi oo mid ka mid ahi uu yahay kaasi haatan habayntiisa gacanta lagu hayo, halka kan kalena uu ahaa mid biyo Yarood ah oo aan saasi biyo xoogan looga cabin.
Guud ahaan Biya yaraanta ayaa saamaysa Gobolka Sanaag iyada oo ay soo baxayaan Qayla dhaan Ba”an oo ku aadan biya yaraantaasi, dhulka ugu badan ee Fariimaha Biya la”aanta ah laga soo dirayo ayaa waxa ka mid ah Degmada Dhahar ee Gobolka Sanaag iyana ka tirsan.
« Maalinta Haweenka Aduunka oo laga xusay Magaalada Bosaaso
Ciidamo Itoobiyaan ah ayaa gudaha u soo galay Magaalada Beled-wayne »